Minisiteran’ny Filaminam-bahoaka: misy andiana polisy mikononkonona korontana | NewsMada
Par Taratra sur 19/09/2019
Zatra ny lalan-dririnina! Fantatra izao fa misy andiana polisy mikononkonona fanakorontanana amin’ny alalan’ny trakta manoso-potaka ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka (MSP) noho ny fanovana vaovao napetraky ny minisitera.
Tao anatin’izao fitondran’ny Filoha Rajoelina izao, maro ny fanovana sy fanatsarana manokana teo anivon’ny minisitera ka isan’ireo voakasik’izany ny MSP. Nihamafy, araka izany ny fitsipi-pifehezana sy ny fanarahan-dalàna, nandritra izay sivy volana nijoroan’ny fitondram-panjakana izay. Nanamafy rahateo ny teo anivon’ny minisitera fa lamina vaovao no napetraka ka tsy misy intsony ny indrafo sy/na fiarovana ireo polisy manao fandikan-dalàna. Tsy natao ho zohy fieren’ny jiolahy sy ireo tsy manara-dalàna ny eo anivon’ny polisim-pirenena. Noho izany, fomba fiasa vaovao no napetraky ny minisitera amin’izao fotoana izao, saingy misy ihany ireo andiana polisy tsy mankasitraka izany lamina sy fanatsarana napetraky ny MSP izany. Fantatra, araka ny loharanom-baovao marim-pototra fa efa mivory any ambadika any ireo andiana polisy mikononkonona fanakorontana satria tsy mankasitraka ny fanavaozana napetraky ny MSP. Mikasa hanaparitaka trakta izy ireo manoso-potaka ny fomba fiasa manaraka ny ara-dalàna amin’izao fitantanana vaovao izao, araka ny fanazavana hatrany.
Voalaza fa tsy manaiky fanovana ireo polisy sasany zatra ny gaboraraka tamin’ny fitondrana teo aloha ka izao mikononkonona hanakorontana izao. Isan’ireo mitarika izany ireo polisy sasany very tombontsoa tamin’ny nanafoanana ny “police routière”, ireo zatra mpanao kolikoly amin’ny fanadinana hidirana ho polisy ary ireo mpanao lava-tanana amin’ny kolikoly amin’ny fampiakarana galona. Nambaran’ny Praiminisitra Christian Ntsay rahateo, nandritra ny fivoriamben’ny polisim-pirenena teny Ivato fa tsy ekena intsony ny fanaovana kolikoly amin’ny resaka fanomezana galona, indrindra ny kiantranoantrano fa mba ireo polisy mendrika sy tsara fitondran-tena ary nahavita be tamin’ny asany no omena tombon-dahiny amin’ny fanondrotana galona.